IVolume Manager- # 1 Mac App Mount Apple & Win Amanani / Amasheya | Plum Amazing
Okusheshayo: 7 / 14 / 21
Umphathi Wevolumu - # 1 Mac App To Auto-Mount Volumes
Landa kusuka ku-Plum Amazing (ngenhla)
noma iMac App Store (ngezansi)
IVolume Manager uhlelo lokusebenza lweMac OSX olusetshenziselwa ukuhlela, ukuzenzekelayo nokuqapha ukufakwa kweWindows (SMB) namavolumu / amasheya / amadiski e-Apple. Kulula ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Mac ukuphatha ukufakwa kwamaWindows (SMB) kanye nokwabelana kwe-Apple. Amalaptop angasebenzisa iMenenja yevolumu ukuzenzela noma ngokuzenzakalelayo ukufaka amavolumu emsebenzini nasekhaya. Ukuhlela okungakhethwa kokufakwa nakho kuqapha ukukhweza nokubalwa kwamasheya. IVolume Manager nayo ingasetshenziselwa ukuvusa amakhompyutha alele kwi-ethernet LAN.
Uma udinga ukufaka amadiski kusuka kwenye indawo kunethiwekhi yakho iMenenja yevolumu ingenza impilo yakho ibe lula. IVolume Manager yenza lokho ekushoyo, iphethe uhlu lwamavolumu (ama-hard drive kwamanye amakhompyutha) anegama lomsebenzisi nephasiwedi edingekayo futhi izobakhweza ngokuzenzakalela noma kunini lapho ufuna khona. Okungcono futhi iyabuka futhi iqinisekise ukuthi zihlala zikhuphukile uma isimo senethiwekhi sishintsha.
IVolume Manager ingabheka intaba futhi uma iseva iyehla (bese intaba inyamalala) Imenenja yevolumu izobuyisa isabelo lapho iseva ibuya ku-inthanethi. Kodwa-ke, ukuze lokhu kwenzeke, udinga ukubheka inkinobho "Monitor this mount and keep it mount".
Ukuhlela okungakhethwa kokufakwa nakho kuqapha ukukhweza nokubalwa kwamasheya / amavolumu / amadrayivu.
IVolumu Manager ingakhweza amasheya eWindows lapho igama lomsebenzisi lisendaweni yeseva elenza ukwabelana kepha iMenenja yevolumu ayikusekeli ukuqinisekiswa kwe-DOMAIN Server ngalesi sikhathi. Njengamanje sisebenzela ukufakazela ubuqiniso be-Active Directory ne-Domain Server. Futhi, lokhu akuthinti ukukhweza okuvamile okungewona kwe-DOMAIN Windows.
IMac OS X Technologies
IVolumu Manager isebenzisa iBonjour ukwenza ukufaka ivolumu yendawo kube lula.
IVolumu Manager ingasethwa ukusebenzisa umsebenzisi oyedwa nephasiwedi yawo wonke amavolumu.
IVolume Manager ingavusa amakhompyutha ku-LAN.
IVolumu Manager ingahlela ukufakwa kwamadrayivu nganoma yiluphi usuku nesikhathi.
IVolumu Manager ingabuyisa kabusha ukushayela / amasheya / amavolumu / amaphuzu ngemuva kokucima.
IVolumu Manger ingalandwa futhi kwi-MacUpdate.
Kwenzelwe Indawo Kwenzelwe
IsiKorea, iSpanishi, isiFulentshi, isiJalimane, isiJapane, isiShayina, isi-Urdu, isi-Arabhu
Ukuze uthole ukwesekwa chofoza lapha.
Ngemuva kokuhlola iMenenja yevolumu sicela uthenge uhlelo lokusebenza ku-Plum Amazing esitolo ukuvula zonke izici nokusekela ukuqhubeka kwemvelo. Ngemuva kokuthenga uthola i-imeyili yokubhalisa enokhiye welayisense. Noma thenga kufayela le- Isitolo se-Apple Mac iTunes.
Sithanda ukuzwa kuwe. Sicela usithumelele imibono yakho, iziphakamiso nezimbungulu ukuze sizilungise. Siyabonga ngokusekela iMenenja yevolumu.
Izisebenzi ePlum Amazing
- ilungise isiphazamisi esibikwe ngumsebenzisi uMichael Bittner: 'Mount Point esivele isetshenziswa'
- I-AFP yenziwe yangatholakali kulabo abasebenzisa iMac OS 11 kuye phambili. I-Apple ayisayisekeli i-AFP.
- ukusekelwa okungeziwe kwe-edsa in sparkle esetshenziswe kunguqulo ye-shareware plumamazing.com
- Kungezwe i-loginservicekit
- amagama ambalwa aseJalimane ashintshiwe ngokunemba
- I-bug encane elungisiwe: Uma ufaka isabelo se-SMB ngendawo yokuphakama engu- "2 level" (okusho: ividiyo / ama-Movie) intaba isebenza kahle, kepha uhlelo lokusebenza lubika ukuthi intaba ayisebenzi. I-log ibika impumelelo, futhi i-macOS ibona ukwabiwa okukhishiwe, kepha isikrini sesimo sikhombisa ukuthi "Akukhishelwe".
- ngaphezu kwesiNgisi okwenzelwe:
- Ihlanganiswe njengokubili kanambambili kwe-Apple Silicon ne-Intel Macs
- Kubuyekezwe uhlaka lwe-Sparkle.
- Khombisa iphutha uma kunendlela yokukhweza engavumelekile.
- Kulungiswe inkinga: Awuzange uhlole amarisidi wohlelo lokusebenza ngesikhathi sokuhlola.
- Kulungiswe iphutha lesikhathi sokuhlanganisa le-target ye-VolumeManager.
- Kulungiswe ukuphahlazeka okuvele lapho i-shareAddress_URL ingekho.
- Incwadi ibuyekeziwe.
- Okungafani. ukuthuthuka
Siyabonga kubasebenzisi ngempendulo enhle
- Uhlaka olusha lwe-LoginServiceKit.
- ilitshe elisha
- sandbox enikwe amandla
- Inkinga ye-phasescript elungisiwe
- manje isebenzisa ukuphepha okusha kwe-Apple notarization
- elungiselelwe ukusetshenziswa kwememori
- Kuhlanganiswe ne-xcode 10.3, isebenzisa Swift 5
- ngemuva kokuphela kwesivivinyo, kufakwe ivolumu yokugcina ekhutshaziwe esikhundleni sevolumu yokuqala. kulungisiwe
- Ukulungiswa okuvela ngezikhathi ezithile kwegama lokwabelana / levolumu eliguqulela egameni lokwabelana langaphambilini ngenkathi umsebenzisi ebhala kunkambu yombhalo wevolumu.
- Kungezwe ukungena ngemvume ekuqaleni
- Ui uyashintsha kuphaneli yezilungiselelo ze-prefs
Ingabe kukhona okungenza uhlelo lokusebenza lube ngcono? Sazise. Ngiyabonga.
- Ukuqapha okuthuthukisiwe nokubuyisa
- Ushintshe umlayezo wempumelelo othengiwe weLayisense
- inkinga elungisiwe lapho engakwazi ukwehlisa ivolumu Uma igama lendawo nokwabelana ngevolumu kuyefana.
- ukulungiswa okuncane kwe-ui nesipelingi.
Sibonga kakhulu kubasebenzisi uDon & Cain. Sicela ugcine iziphakamiso ziza!
- Kungezwe ukubuyiswa okuzenzakalelayo
- lungisa iphutha elingaphenduli ngomshini wokukhiya / wokuvula
- Kungezwe inkinobho 'yokuhlola isibuyekezo' kuzilungiselelo.
- ukuphahlazeka okungaguquki okwenzeke lapho i-shareAddress_URL ingekho.
- ucingo lwe-async olungaguquki
- uhlelo lokusebenza olungabhalisiwe manje lwehla kangcono kakhulu
- Izinguquko zokulayisensa
- Shintsha ekunikezeni amalayisense
- ilayisense elithuthukisiwe
- Ukukopisha nokunamathisela kusebenza emikhakheni yelayisense
sithokozela yonke impendulo. uma uthola isiphazamisi usazise. uma ibhukwana lidinga ulwazi oluthe xaxa sazise. iziphakamiso zakho zingasiza uhlelo lokusebenza futhi. ngiyabonga
- inguqulo yokuqala yokuvuselelwa kuhlelo lokusebenza oludumile lwe-MountWatcher lwe-Mac
Ibhukwana leMenenja yevolumu
Buyekeza Kusuka kuMacUpdate.com
1.9.1 ngeyokugcina enokusekelwa yi-AFP